Xubno ka tirsan golaha wasiirrada oo maanta hor tegaya golaha shacabka – Hornafrik Media Network
Xubno ka tirsan golaha wasiirrada oo maanta hor tegaya golaha shacabka
Xildhibaannada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta yeelanaya kulan su’aalo lagu weydiinayo xubno ka tirsan golaha wasiirrada ee xukuumadda Soomaaliya.
Wasiirrada gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Xamza Siciid Xamza iyo caafimaadka Fowsiya Abiikar Nuur ayaa lagu wadaa inay maanta hortagaan golaha, kuwaas looga yeeray fadhiga guud ee golaha shacabka.
Su’aala weydiinta wasiirradaas ayaa ku saabsan wasaaradaha ay maamulaan howlaha u qobsoomay iyo waxa uu yahay qorshaha u yaalla.
Wasiirka Gargaarka Xamza Siciid ayaa wax laga weydiinayaa sida loogu gurmaday dadkii ay qeybo ka mid ah gobolada koonfurta, bariga iyo bartamaha dalka ku saameeyeen fatahaadihii iyo daadadkii ka dhashay roobkii deyrta ee dalka ka da’ay iyo arimo kale oo ku saabsan howsha wasaaradda.
Sidoo kale wasiirka Caafimaadka Fowsiya Abiikar ayaa wax laga weydii doonaa arimo ay ka mid yihiin sida ay wasaaradeedu ula tacaashay cuduradii ka dhashay daadadka iyo fatahaadihii ka dhashay roobabkii da’ay iyo howlaha caafimaad ee dalka.
Abiy Ahmed oo war ka soo saaray weerar lagu qaaday masaajido ku yaalla dalkaas
In ka badan 30 dagaalame oo lagu dilay dalka Mali.